Kirsten Baete oo Nebraska ah ayaa ku guulaysatay Martiqaadka Sands Cad ee Haweenka Bahamas NCAA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Kirsten Baete oo Nebraska ah ayaa ku guulaysatay Martiqaadka Sands Cad ee Haweenka Bahamas NCAA
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Sports • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Sarsare Kirsten Baete oo ah sanadka shanaad ee Nebraska ayaa toogtay wareega ugu dambeeya ee xitaa-par 72 Axadii si uu ugu sii socdo guusha silig-ilaa-siliga ee sanadlaha labaad ee White Sands Bahamas Casuumada NCAA. Guusha, hal istaroog oo ay ka sare martay Emily Hawkins oo ka tirsan Campbell, ayaa ahayd xirfadii ugu horreysay ee Baete.
Campbell, isreebreebka Gobolka ee NCAA horaantii sanadkan, ayaa ku guuleystay horyaalka kooxda, isagoo ku garaacay Cornhuskers afar jeer.
Casuumada sharafta leh ee White Sands Bahamas NCAA, oo ay ka muuqato qaar ka mid ah kooxaha kubbadda cagta ee ugu sarreeya Mareykanka, ayaa sii socota usbuucan Koorsada Golf Club Ocean.
Ku xiga waa 12 kooxood oo rag ah usbuucan koorsada Golf Club Ocean.
Baete wuxuu ku dhameystay 10-sano ka yar 206, halka Hawkins uu eryay 7-hoos-par 65 si uu ugu dhajiyo 207 Koorsada Golf Club ee Badweynta Atlantis. Mikayla Dubnik oo Mercer ah ayaa kaalinta saddexaad galay 68-211.
Iyadoo seddex ciyaaryahan ay ku dhameysteen 10-ka sare, Campbell, oo ah isreebreebka Gobolka NCAA horaantii sanadkan, ayaa ku guuleystay horyaalka kooxda, isagoo ku garaacay Cornhuskers afar jeer, halka Jaamacadda martida loo yahay ee Miami ay ku dhameysatay kaalinta seddexaad.
"Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof walba oo koorsada jooga - kormeeraha, dukaanka pro; koorsadu waxa ay ahayd gabi ahaanba qaab cajiib ah, "Baete ayaa tiri ka dib markii ay dhajisay dhibcaheeda xirfadeed ee hooseeya iyo xirfadeeda afaraad ee ugu sareysa 10. "Waxay ahayd wax qurux badan, waxayna hoos u dhigtay koorsada aan jeclahay."
"Tani waa guushii ugu horeysay ee Kirstin, sidaas darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inay hesho [guusha] suunka hoosteeda," ayay tiri tababaraha Nebraska Lisa Johnson. "Waxay si adag u shaqeysay shantii sano ee ay joogtay Nebraska, waana ciyaaryahan aad u fiican iyo ciyaaryahan la tababari karo oo ay cajiib u tahay inay hesho guushan oo ay matasho Huskers."
Campbell wuxuu dhajiyay afar-ciyaaryahan oo 10 ka yar 854 in ka badan 54 godad iyadoo Hawkins iyo Anna Nordfors ay hogaaminayaan. Nordfors, oo leh wareega ugu dambeeya 72, ayaa ku dhameysatay afaraad shaqsi ahaan iyadoo 4-in ka yar 212 wadar ahaan. Tomita Arejola ayaa ku xiran 10th 69-217 halka Patricia Garre Munoz ay ku dartay 226.
"Kani waxa uu ahaa mid qaas ah oo noo ahaa usbuuca ugu fiican," ayuu yiri tababaraha Campbell John Crooks. "Kooxdani waxay samaysay wixii loo baahnaa, Emily Hawkins ayaa toogtay 65 maanta, taasina waxay ahayd mid gaar ah. Xubin kasta oo kooxda ka mid ah ayaa hore u toogtay oo caawiyay Campbell xilli ciyaareedkan. "
"Hambalyo kal iyo laab ah ayaan u dirayaa Kirsten Baete iyo dhammaan dadkii ka qaybqaatay daabacaadda Haweenka ee White Sands Bahamas NCAA Casuumad," ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Ku-Xigeenka Mudane I. Chester Cooper, Wasiirka Dalxiiska, Maal-gashiga & Duulista Bahamas. "Bahamas waxay leedahay dhaqan soo jireen ah oo ah soo jiidashada goleyaasha adduunka oo dhan si ay u helaan koorsooyinka golf-ka ee heer caalami, waxaana rajeyneynaa in inta ay kooxaha Jaamacadu halkan joogaan inay ku raaxaystaan ​​jasiiradaheena quruxda badan, gudaha iyo dibadda koorsada golf."
Kooxda kama dambaysta ah waxay dhalisay: Campbell 854, Nebraska 858, Miami 862, Mercer 870, Florida International 900, Northern Illinois 905, Iowa 908.
Abuuraha White Sands Bahamas NCAA Casuumad, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah kooxaha kubbadda cagta ee ugu sarreeya Maraykanka, ayaa sii socda usbuucan Koorsada Golf Club Ocean iyada oo tartanka ragga uu ka kooban yahay 12 dugsi, oo ay ku jirto Jaamacadda martida loo yahay ee Arkansas ee Little Rock. Ka dib laba maalmood oo wareegyo tababar ah oo bilaabmaya Arbacada, tartanka 54-god wuxuu bilaabmayaa Jimcaha, Oktoobar 29 koorsada 7,159-yard Ocean Club.
Marka laga soo tago Little Rock, kooxaha kale ee ku tartamaya dhacdada waxaa ka mid ah Bowling Green State University, East Tennessee State University, Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast University, Jacksonville University, Lamar University, Lipscomb University, University of Michigan, University of Mississippi, University ee San Francisco iyo Jaamacadda South Florida.
Jaamacadda Houston ayaa ku guulaysatay xaflada furitaanka sanadka 2019 iyada oo wadarta guud ee afar nin ka kooban tahay 833.
Jadwalka dhacdooyinka martiqaadka White Sands Bahamas ee ragga ee soo socda:
Khamiis, Oktoobar 28: Wareegyada Tababarka Kooxda
Iyada oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo qiyaamo iyo 16 meelood oo jasiirad u gaar ah, Bahamas The waxay ku taal meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyadoo bixisa baxsasho fudud oo duullimaad ah oo ka fogaynaysa dadka socotada ah maalin kasta. Jasiiradaha Bahamas waxay leeyihiin kalluumaysi heer caalami ah, quusitaan, doon doon ah, iyo kumanaan mayl oo biyaha iyo xeebaha ugu quruxda badan ee dhulka sugaya qoysaska, lammaanaha, iyo tacaburayaasha. Ka baadh dhammaan jasiiradaha ay tahay inay ku bixiyaan www.bahamas.com ama Facebook, YouTube, ama Instagram si aad u aragto sababta ay uga wanaagsan tahay Bahamas.